ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ပြဿနာအပေါင်းတို့ မြစ်ဖျားခံရာ”
Yes..Good. Agreed it.
မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း ကိုပေါ ရေးထားတာ ကောင်းတယ်၊ ကိုပေါအပြင် အင်တာနက်ပေါ်က တခြား ဘလော့ဂါတွေပါ အတတ်နိုင်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်လှုံဆော်သင့်ပါတယ် ...
ကိုပေါ ရေးတာနဲ့ ၀န်ကြီးဇော်မင်း ပြောတာနဲ့ ထပ်တူကြနေလို့ အောက်ကလင့်ကို ထည့်ပေး လိုက်ပါတယ်။ အသံတူနေလို့ပါ။ ကမ္ဘာမှာ ဆည် အသစ်ဆောက်တဲ့ ကိစ္စတွေ အတော် စဉ်းစားလာပါပြီ။ တရုတ်မှာ ထပ်ဆောက်မယ်ဆို ထပ်ဆောက် နိုင် မယ့် မြစ်တွေ ယူနန်ထဲမှာပဲ သံလွင် အပေါ်ပိုင်း ကျန်နေသေးတယ်။ စီမံကိန်းချပြီးပေမယ့် ဘာကြောင့် ဆက်မလုပ်တာလဲ။ မြန်မာပြီးမှာ မြစ်ကြောင်း ပြောင်းမှာ စိုးရိမ်လို့တော့ မဟုတ်တန်ကောင်းပါ။
Hi Anonymous ( 3:04 pm),
Thanks for your link. I didn't know about it before you mentioned. By the way, U Zaw Min's stand and my stand are not the same. He is for the present dam project and I am against the present dam project. I have clearly stated my reasons in my post.
(၅၂). နှစ်ကြာသည့်တိုင်. Going Strongဖြစ်နေတာဟာ. အခုမြစ်ဆုံ
စီမံကိန်းလို. ရေကာတာ(ရေလှောင်တာတမံ)မဟုတ်ခဲ့လို့ဘဲ၊. သ ဘာဝ
ရေတံခွန်အောက်မှာTurbineကို. လည်စေပြီးလျှပ်စစ်. ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ
ဖြစ်လို့. ရေစီးမှာအနှောက်အယှက်. တစုံတရာမရှိခဲ့ဘူး၊. ဒါကြောင့်
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှု. သိပ်မရှိခဲ့ ဘူး၊.
River lives likeaman in three stages, younger, matured and older.
Natural processed such as erosion, deposition of sediments, forming the sand bars, shallowing and shifting, stacking the channels occurs prior than civilization.
Present Irrawaddy dispute is happened between sentimental and economical issues.
Anonymous@September 14, 2011 9:37 PM သို့
လောပိတဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက် အင်းလေးကန်တောင်ဖက် မိုင် ၅၀ လောက်အကွာ ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံမြို့နယ်မှာ ၂၀၇ စတုရန်းကီလိုမီတာရှိတဲ့ မိုးဗြဲဆည်ကို ၁၉၇၀ မှာ အပြီးဆောက်ထားပာတယ်။ သဘာဝရေတံခွန်လဲ မဟုတ်ပာဘူး။ မိုးဗြဲကရေကို မိုင် ၃၀ ကျှော ရေမြောင်းနဲ့သွယ်ယူလာပြီးမှ ပေ ၁၃၀၀ လောက် နက်တဲ့ ချောက်ကြီးထဲမှာ စက်ရုံကို ဆောက်ထားတာပာ။ ( 19°33'18.69"N 97°21'30.35"E )
ဒာကြောင့် ရေနည်းနည်း, စက်တပ်ဆင်အား နည်းနည်းနဲ့ ထုတ်နိုင်စွမ်းများတာပာ။ အခု မြစ်ဆုံကတော့ ဒီဇိုင်းအရကို Gravity Difference မရှိလို့ လောပိတလောက် အမြတ်မထွက်ပာ။ ပေ ၈၀၀ လောက်မြင့်တဲ့ တမံမှာ ရေအပြည့်ဖြည့်ပြီးမှ လေပိတက ရေအရှိန်ကို ရမှာပာ။
၁. လူထုအစိုးရမဟုတ်တဲ့ စစ်အစိုးရက
၂. လူထုကို တိုင်ပင်ချပြခြင်းမရှိဘဲ
၃. ပြည်တွင်းမှာသုံးဖို့ သက်သက် စက်ရုံဆောက်မယ်ဆိုရင်ရောဗျား...
ကျွန်တှောဆိုရင်တော့ အပှောကအချက်တွေအရ ဆောက်ရင် သဘောတူတယ်။
အခု မြစ်ဆုံကို သဘောမတူတာက ပညာရှင်တွေနဲ့ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ သဘောထားကို အရေးတယူမလုပ်ဘဲ ကိုယ့်နိုင်ငံအမြတ်မရှိတဲ့ ကိစဿစကို လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်သွားလို့ ပာ။
မိတ်ဆွေရဲ့ မေးခွန်းတွေအတွက် ကျနော့်ပို့စ်ထဲမှာ အဖြေပါပြီးသားပါ။ ကျနော် ကန့် ကွက်ရခြင်း အကြောင်း ၃ ချက်ကုို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။
Poet Innwa U Ko Lay said to Min Ko Nang " I'm emotional, practical thing was done by politician like as you".
Most artists' view is based on sentimental view rather than technical.
They are good sense to love nature but look after whole country development that need well set up infrastructure.
thanks for ur discussion of Irrawaddy dam project;
*this is an enormous project
*the present regime is "illegitimate".
*they have no RIGHT to handle this giant project.
*actually they are transitional defacto gov.
*this issue should be settled by next "legitimate"
govt. by the people ,for the people of Burma.
Thanks for your summarized views. I fully agree with them. One more thing to add, the present government should stop constructing it right now.
When you use your brain, you are not that bad!
i agree with above Anonymous...
nga paw.. good job for this one.. :D:D
u should use your brain more..
or may be u took your med before u wrote this..
aww.. nga paw.. nga paw...
mun talaka lal mum pae ma pot..